Isambane News - Page 2 of 53 - Sibuya Nazo Zishisa
Sitholakale isidumbu somfana oneminyaka engu-6 owawela emgodini Bangu-399 abantu asebengenwe yiCovid-19 eNingizimu Afrika namuhla UMoshe Ndiki wenze inkonzo yomngcwabo kanokusho yenja yakhe U-R Kelly ugwetshwe iminyaka engu-30 ngamacala okuhlukumeza ngokocansi Kunomuntu wesibili okutholakale ukuthi une-Monkey Pox eNingizimu Afrika
Ezomphakathi Izindaba Okufakiwe
Sitholakale isidumbu somfana oneminyaka engu-6 owawela emgodini
Ezempilo Izindaba Okufakiwe
Bangu-399 abantu asebengenwe yiCovid-19 eNingizimu Afrika namuhla
UMoshe Ndiki wenze inkonzo yomngcwabo kanokusho yenja yakhe
U-R Kelly ugwetshwe iminyaka engu-30 ngamacala okuhlukumeza ngokocansi
Ezempilo Izindaba Izindaba ezihamba phambili Okufakiwe
Kunomuntu wesibili okutholakale ukuthi une-Monkey Pox eNingizimu Afrika
Owesilisa obedakiwe ethwele imbuzi ngebhuthi yemoto yakhe ushayise izimoto ezimbili ngaphambi kokushayisa isihlahla
Owesilisa obethwele imbuzi ngebhuthi yemoto yakhe ushayise izimoto ezimbili ngaphambi kokushayisa isihlahla kuTodd Street eVerulam – KZN ntambama (ngoLwesihlanu). Amalungu…
Abadayisi bezifihla buso bathi bazobulawa yindlala njengoba ukugqoka izifihla-buso kungasadingeki eNingizimu Afrika
Abantu baseNingizimu Afrika abasadingi ukugqoka imaskhi yobuso. Uhulumeni uphothule imithetho esele ye-COVID-19. Abantu abebeziphilisa ngokudayisa izifihla-buso bathi ukudayisa izifihla-buso bsekuphenduke…
UMoses ‘Lady Mo’ Sibiya uzakhele udumo ngokucula emngcwabeni
Uphendula lokho okuhloswe ukuba kube usuku oludabukisayo noludangele lube uhleko. Nakuba abantu bekhala uma kungcwatshwa, uma ekhona, izinyembezi azibonakali. Uvele…
Ezempilo Izindaba Izindaba ezihamba phambili
Isifo semonkeypox sesifikile ukuzothelela abantu eNingizimu Afrika
INingizimu Afrika iqophe icala layo lokuqala leMonkeypox kuleli. UNgqongqoshe Wezempilo uJoe Phaahla ubekhuluma nabezindaba ngoLwesine mayelana nokuchithwa kwemithetho mayelana nezimo…
Abantu baseNingizimu Afrika akusadingeki ukuthi bagqoke imaski yobuso
Uhulumeni useyiqedile imithetho esele ye-COVID-19. Imithetho yokugqoka imaski endlini kanye nomkhawulo emicimbini yomphakathi nemibuthano yonke isuliwe. UNgqongqoshe Wezempilo u-Joe Phaahla…
Ezosaziwayo Izindaba Okufakiwe
UDkt 3 Seconds ulihlehlisile icala lokweyisa elibhekene noSmirnoff noQuality Biyela
Inkantolo kaDkt 3 Seconds Kwagudluzungene ilihlehlisile icala lokweyisa elibhekene noMphile “Smirnoff” Gumede noQuality Biyela ngenxa yokushoda kobufakazi. U-Smirnoff no-Quality benza…
Akasekho emhlabeni umqondisi weVodacom uDavid Brown
IVodacom Group isimemezele ukuthi umqondisi wayo ozimele ongeyona ingxenye yesigungu esiphezulu uDavid Brown udlule emhlabeni mhla ziyi-19 kuJuni 2022. UBrown…
Izindaba Izindaba ezihamba phambili Okufakiwe Umgibeli
UNgqongqoshe uNeliswa Peggy Nkonyeni ubandakanyeke engozini emgwaqeni u-R66 oLundi.
UNgqongqoshe wezokuThutha, ukuPhepha nokuXhumanisa uMphakathi, uNksz Neliswa Peggy Nkonyeni ubandakanyeke engozini emgwaqeni u-R66 oLundi. UNgqongqoshe wezokuThutha, ukuPhepha nokuXhumanisa uMphakathi, uNksz…
Umakoti umbozwe ngengubo yemali engama-R100 wodwa eMkhosini wesintu
Abantu baseNingizimu Afrika basale bekhexile futhi benemibuzo eminingi ngomcimbi womshado wesintu obuwubukhazikhazi Izithombe zikhombisa umakoti egqoke isigqoko sakhe, esaziwa ngelesicholo,…
Ugwetshwe iminyaka emihlanu ebhadla ejele umshayeli wetekisi owayethutha abantu ababetapa ngo-Julayi 2021
Imoto kaLungelo Nthenga yatholwa igcwele izinhlanzi ezifakwe ngothayela, irayisi kanye nezimpahla ezigcinwe ezindaweni ezakhelene nazo ebeziphangiwe ngesikhathi eboshwa ngesikhathi kuvinjwa…